မအီတဲ့ထမင်းပွဲ ( ပဲပြားပေါင်း ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မအီတဲ့ထမင်းပွဲ ( ပဲပြားပေါင်း )
မအီတဲ့ထမင်းပွဲ ( ပဲပြားပေါင်း )
Posted by မွသဲ ( 17082011 ) on Mar 27, 2012 in Creative Writing | 20 comments
စားမယ် ၀ါးမယ် အလကားကျွေးမယ် ကိုယ့်ဟာကိုယ်ချက်စားကွယ်
ဟိုတနေ့က ကြက်ကြာဇံပေါင်း လေးတင်ပေးလိုက်တာ တချို့ကလဲ ထမင်းစားရင် အငံလေး အစပ်က လေးပါမှစားကောင်းတယ်ဆိုသူများအတွက် ကြက်ကြာဇံပေါင်း နဲ့တွဲစားလို့ရအောင် ပဲပြားပေါင်း ငံငံ စပ်စပ်ကလေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကြက်ကြာဇံပေါင်း၊ ပဲပြားပေါင်း ၊ ဟင်းချိုလေးနဲ့ဆို ကျန်းမာရေး နဲ့ပြည့်စုံပြီး နွေပူပူမှာ မအီပဲသက်တောင့်သက်သာ စားလို့ရတဲ့ထမင်းဝိုင်းလေးဖြစ်မှာပါ။
၁ ။ တိုဟူး ၃၀၀ ဂရမ် ( ဒီမှာတော့ ပဲပြား ပေါ့ )
၂ ။ ကြက်သွန်ဖြူ ၂ မြွာ ( နုတ်နုတ်စင်းထားပါ )
၃ ။ သကြား လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတ၀က်
၄ ။ နှမ်းဆီ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
၅ ။ ငရုတ်ကောင်းမှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတ၀က်
၆ ။ ငရုတ်သီးမှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း ( ငရုတ်သီးအစိမ်းတောင့်ထဲ့လဲရတယ် )
၇ ။ ကြက်သွန်မိတ် ၁ စည်း ( ပါးပါးလှီး )
၈ ။ ပဲငံပြာရည်အကြည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၄ ဇွန်း
၁ ။ ပဲပြားကိုဓါးဖြင့်နှစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်ပါ။
၂ ။ ထို့နောက် ပန်းကန်တခုထဲထဲ့ပြီးပေါင်းအိုးဖြင့် ရေနွေးခံကာ ၁၅ မိနစ်ခန့်မီးများများဖြင့်ပေါင်းပေးပါ။
၃ ။ ပြီးမှ ဆော့အတွက် သကြား၊ နှမ်းဆီ၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်၊ ငရုတ်သီးမှုန့် ( သို့ ) ငရုတ်သီးစိမ်း သေး သေးလှီး၊ ကြက်သွန်မိတ်၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ပဲငံပြာရည်အကြည် တို့ကို ခွက်တခုထဲထည့်ပြီးရောမွှေပါ။
၄ ။ ပဲပြားများကိုပေါင်းပြီးလျှင် အပေါ်မှ ဆော့များကိုလောင်းချပေးပြီးကြက်သွန်မိတ်လေးများဖြူး ပေးလိုက်ပါ။
၅ ။ အရသာရှိပြီးကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော ပဲပြားပေါင်းကိုစားသုံးနိုင်ပါပြီ။
မှတ်ချက် – စားခါနီးမှပေါင်းပါ။ ပေါင်းပြီးပြီးချင်းစားပါ။ အေးသွားလျှင်ပဲပြားမာသွားပြီးစားမကောင်းပါ။
အစ်မ ရွှေကြည်တို့က အိမ်နဲ့ဝေးနေရတော့ အလုပ်ပိတ်ရက်ဆိုရင် စားချင်တာလေးတွေလုပ်စားဖြစ်ပါတယ်။
ကြက်ကြာဇံပေါင်းကိုလည်း စမ်းသပ်ကြည့်ဖို့ စီစဉ်နေတာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါးပေါင်းထုပ်လုပ်နည်းလေးများ
သိရင် ပြောပြပေးပါနော်။ ရွှေကြည်ကလူသစ်ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ငါးပေါင်းထုပ်က ရှမ်းငါးပေါင်းထုပ်လား။ ငါးဖယ်နဲ့ ရဲယိုရွက်ငါးပေါင်းထုပ်လား။ ကြိုက်တာပြော။ တင်ဖို့အသင့်။
ငါးဖယ်နဲ့ ရဲယိုရွက်ငါးပေါင်းထုပ်ကိုပြောတာပါ အစ်မ။ ကျေးဇူးပါ။
အဲဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ပိတ်ရက်မှာချက်စားပြီး ကျန်တဲ့ရက်က ဖြစ်သလိုပဲ ဓနုဖြူ ဒေါ်စောရီကပဲ
သဲလေးရေ ဒါလေးနဲ့ တွဲဖို့ အရေသောက်လေး ကို ကျား ဖြစ်ဖြစ် မြန်မာဖြစ်ဖြစ် အေးအေးလေးနဲ့ မှ ကွဲ့။
အခုတလော ကိုပေ့ ကို ကြည့်ရတာ တစ်ခုခုတော့ တစ်ခုခုဘဲ။
သတိထားမိသလောက်တော့ နာလံထပြီး ကထဲကပါဘဲ။
jk ချိတ်ချိုးနဲ့။ ;-)
ကျားလေးကတော့ သောက်လိုက်တာအရှိန်လွန်ပြီး ဒါ့ပုံရိုက်ချိန်မရလိုက်လို့ပါ။ နောက်များ စားစရာတင်ရင် ကိုပေ့ဖို့ အရည်တွဲတင်ပါ့မယ်။ ယခုတော့ ရေနဲ့ပဲစားလိုက်အုံးနော့် ကိုပေ။
တကဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ ဟင်းချက်နည်း တွေ ဘဲ သဲနုရေ။
ညကြီး မင်းကြီး ဗိုက်ကြီး ဆာ နေပါပေါ့။
ပဲပြားက တရုတ်ဆိုင် သွားရင်တော့ ရမယ်။
ကျေးဇူးပါ သဲနုရေ့။ :-)
ဟုတ်တယ် အရီးလတ်ရေ။ အိမ်မှာတော့ ဆီပြန်ထက်ဒီလိုဟင်းတွေပဲ နေ့တိုင်းချက် စားဖြစ်တယ်။ ပေါင်းတယ်၊ ပြုတ်တယ်၊ ကင်တယ်၊ လှော်တယ်။ ဆီပြန်စားချင်ရင်တော့ မြန်မာထမင်းဆိုင်မှာပဲ တခါတလေသွားစားတယ်။
အန်တီသဲနုရေ… ပို့စ်ကို health fitness ခေါင်းစဉ်အောက်က food and drink မှာ ထည့်ထားပေးပါလား။ အရင်တခါ ကြာဆံကြက်ပေါင်းကိုပါ တခါထဲ ပြောင်းပေးလိုက်ရင် နောင်တချိန်ရှာတဲ့အခါ တစုတစည်းထဲ တွေ့ရမှာပါ။ ကျနော် အခုဟင်းနှစ်မျိုးလုံးကို စမ်းကြည့်ဖို့ စိတ်ကူးထားပါတယ်။ စကားမစပ် ကျနော်က စုချက် sous chef တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ တွေ့သမျှအကုန်လုံးကို အိုးထဲစုပစ်ထည့်ချက်တတ်လို့ပါ။
ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ကျွန်မတော့မလုပ်တတ်လို့ သဂျီးပဲတရတော့မယ်။ သဂျီးရေ ပြောင်းပေးလို့ရမလား။ ကိုကြောင်ကြီးပြောသလို။ ကျေးကျေးပါ။
ကျွန်မလဲကျောင်းတုန်းက အိမ်ကပေးသမျှကြော်တွေရယ် ဆန်ရယ် ဆောင်ရှေ့ကသရက်သီးစိမ်း ရယ် အကုန်ပစ်ထဲ့ပြီးချက်စားဖူးပါတယ်။ စားလို့တော့အကောင်းသား။ အရသာစုံလို့။ သူငယ်ချင်း လာလည်ရင်သူလဲစားတာပဲ။ ကောင်းလို့တဲ့။ ဟီဟိ
ပဲပြားဆို .. ဟင်းချက်တာရယ် … ၊ သုတ်တာရယ် … ၊ အစာသွပ်တာရယ်လောက်သာ လုပ်တတ်တာ…. ။ ပဲပြားကို အခုလိုတော့ တစ်ခါမှ ပေါင်းမစားဖူးဘူး …. ။ လုပ်စားကြည့်ဦးမယ့် … ရှဲရှဲ …
ဒါနဲ့ .. အစ်မရဲ့ထမင်းဝိုင်းက စားချင်စရာလေးနော် … အိမ်ဦးနတ်ကို ပူစော်ထားတာထင်ပါရဲ့ .. အဟီး
ဟီဟိ မှန်ပါ့။ အိမ်ဦးနတ်အတွက်ပေါ့။ တချက်ခုတ် သုံးချက်လောက်ပြတ်အောက်လုပ်ထားတာ။ ၀ိတ်ချဖို့ရယ်။ အဆီမပိတ်ဖို့ရယ်။ စားကောင်းဖို့ရယ်ပေါ့။
အစ်မရေ ပဲပြားကို ဒီလိုတော့ တစ်ခါမှ မစားဖူးသေးဘူး
အစ်မလုပ်ပြထားတာလေးကလည်း စားချစ်စရာပဲ .
တစ်ခါလောက်လမ်းကြုံ အစ်မ အိမ်ဝင်လည်ဦးမှ …
ပေါင်းလိုက်တော့ပဲပြားကအိသွားတာ။ ပဲငံပြာရည်အငံအရသာရယ် အမကတော့ငရုတ်သီးစိမ်းနဲ့ လုပ်တာမို့စပ်စပ်ကလေးရယ်နဲ့ စားလို့ကောင်းသလို အလုပ်လဲမရှုပ်ပဲ လွယ်ကူတဲ့ဟင်းလေးပါ။ ကိုရီးယားတွေလုပ်စားတာ။ အမလဲလိုက်လုပ်ကြည့်တာ။ သတ်သတ်လွတ်စားရင်လဲအဆင်ပြေ တယ်။
ကြည့်ရင်းနဲ့တောင် သရေ တွေ ကြလာတယ် ဟိဟိ